Bonus Terms sy Conditions |
£ 5 Free Registration Bonus Terms sy Conditions
Zavatra tsy fisondrotana ihany no misy ny manankery kaonty vaovao mpihazona antitra 18 na mihoatra.
Ny tombony dia ho nisaina ny vaovao eo nahomby kaonty fanamarinana ny mailaka adiresy voalaza. Tsy misy mipetraka dia ilaina.
Mety handray ny 10 minitra fa ny tombony ho voalaza.
Iray ihany isaky ny Casino tombony mpanjifa.
Bonus dia manan-kery 28 andro taorian'ny bola. Rehefa afaka izany, fotoana, ny tombony dia hitsahatra ny ho manan-kery sy ny sisa dia hesorina-bola avy amin'ny kaonty.
Izany tolotra tsy ampy amin'ny 2 Janoary 2015 mandra-pisian'ny filazana.
Ity tombony mitondra ny 100x wagering fitakiana. Ny £ 5 dia tsy maintsy ho wagered, fara fahakeliny 100 fotoana mialoha ny fanafoanana azo atao. Noho izany dia mila wager 100 X £ 5 = £ 500 eo anatrehanao afaka hiala ny tombony.
Wagers amin'ny Blackjack sy Roulette tsy fandraisana anjara amin'ny fampihenana ny ny wagering takina ny tombony mizana.
Maximum winnings avy amin'izany tombony ho Tsikirity amin'ny £ 20. Milaza izany fa ny ambony indrindra ny £ 20 hanampy ho ny withdrawable mandanjalanja. Misy tsy tratry ny mahay mandanjalanja indrindra fa ny vola eo mahomby wagering ho voided.
Zavatra tsy tombony ihany no azo ampiasaina dia afaka hilalao amin'ny misy ny slot lalao.
Minimum fanafoanana dia £ 10. Players hisoratra anarana dia tsy maintsy manan-kery ny karatra fandoavam-bola, fa ny tanjon'ny withdrawals.
Fitantanana fiandry ny zo hitaky misy tombony raha toa mpanjifa hita ho tampering miaraka na miteny ratsy izay lafiny io fisondrotana.
Management fanapahan-kevitra farany amin'ny toe-javatra rehetra.
Tonga soa eto petra-bola Bonus - petra-bola lalao tombony Terms sy Conditions
Tonga soa eto petra-bola ny tolotra ihany no misy ny manankery kaonty vaovao mpihazona antitra 18 na ny nanao ny voalohany 3 mipetraka amintsika.
Ny manaraka dia misy petra-bola lalao:
1St petra-bola – 200% bola lalao hatramin'ny £ 50 in tombony.
2ND petra-bola – 100% vola-lalao tombony niakatra ho any £ 200 in tombony
3RD petra-bola – 50% vola-lalao tombony niakatra ho any £ 250 in tombony
Mba ho afaka ny hitaky ny Welcome tombony, mpilalao dia tsy maintsy hametraka / hamindra farafahakeliny ny £ 10 ho an'ny tsirairay avy ny petra-bola telo lalao.
Bonus vola mitondra ny wagering fepetra ny 40x ny mifanaraka ilaina ny ny petra-bola sy ny tombony voalohany nomena vola.
Ihany wagers natao tamin'ny lalao Real vola no anjara manoloana ny wagering takina. Wagers natao tamin'ny Play Fa Free lalao dia tsy isaina ho any ny wagering takina.
Rehefa nisaotra ny tombony mbola manan-kery ho an'ny 28 andro. Tokony tsy vita ny wagering fepetra takiana ao amin'io vanim-potoana, vola sisa dia hesorina avy amin'ny kaonty.
Iray ihany no afaka ny ho mpanao tombony amin'ny fotoana. Raha manana efa misy tombony fifandanjana Active efa, izany tombony hanampy ho anao eo am-piandrasana tombony filaharana. Masìna ianao, mankanesa any “ny kaontiko” fizarana hijery ny tombony manontolo filaharana.
Aiza ny mpanjifa mangataka ny fisintahana na ny famindrana avy ny lalao kaonty, talohan'ny ilaina takina wagering ho nihaona, dia ho very ny tombony sy ny winnings vokatry ny tantara. Ihany ny isan'ny petra-bola tany am-boalohany na ny sisa tavela fifandanjana ny petra-bola tany am-boalohany dia ho withdrawable.
Aiza misy teny ny tolotra na ny fampiroboroboana ny vaky na misy porofo ny andiam-filokana napetraka noho ny mpanjifa na ny vondrona ny mpanjifa, izay petra-bola noho ny tombony, Nohatsaraina vola, maimaim-poana filokana na ny dokam-barotra hafa tolotra vokatry antoka mpanjifa tombony ijerena ny vokatra, na tsirairay na ao anatin'ny vondrona, Fitantanana fiandry ny zo hitaky ny tombony singa toy izany filokana. Isika koa hitehirizany ny zo hangataka izay mpanjifa mba hanome ampy antontan-taratasy ho antsika mba ho afa-po tanteraka ao amin'ny fisainana mazava ny amin'ny mpanjifa ny maha-talohan'ny antsika noderainy misy tombony, maimaim-poana na tolotra Bet ny tantara.
Tolotra rehetra toy izany dia natao ho fialam-boly sy ny Management mpilalao mety amin'ny hany fisainana mazava mametra ny taratasim-panamarinanao ny mpanjifa mba handray anjara amin'ny rehetra na ny ampahany misy fisondrotana.
Tolotra mpanjifa rehetra dia voafetra ho iray isaky ny olona, family, tokantrano adiresy, adiresy mailaka, ny nomeraon-telefaoniny, fandoavam-bola mitovy isa kaonty (e.g. debit na ny carte de crédit, etc.), ary nizara solosaina, e.g. panjakana na ny toeram-piasana famakiam-boky. Isika hitehirizany ny zo hanaisotra ny fisian'ny tolotra rehetra na tolotra rehetra akory mpanjifa na ny vondrona ny mpanjifa amin'ny fotoana rehetra sy amin'ny tanteraka ny hany sy fisainana mazava. Manolotra ihany no mihatra amin'ny mpanjifa izay efa nanao tena / tena bola petra-bola miaraka amin'ny Casino
Fitantanana fiandry ny zo hanafoana, hamarana na manova misy fifaninanana na fisondrotana (na ny fitsipika azy) amin'ny fotoana rehetra, ka tsy misy fampahafantarana mialoha
Fiandry fitantanana ny zo hampiasa voalohany anarana, voalohany ny farany anarana, anaram-bosotra sy / na ny firenena na tanàna-ponenana tany misy fampahafantarana fanambarana, mpandray misy tombony fampahafantarana sy amin'ny asa varotra, na eo amin'ny Service, na any an-kafa.
Mety misafidy-avy nahazo fisondrotana sy mifandray amin'izany fampahafantarana ny fifandraisana amin'ny alalan'ny fifandraisana mpanjifa fanohanana.
mpiasa, mpitarika sy tale ao Nektan Ltd, ny fampahafantarana na ny sampan-draharaha hafa, licensees sy ny licensors, mpanome tolotra sy ny zavatra hafa mifandray amin'izany na mpikambana orinasa dia tsy ho azo fidiana ho amin'ny fampiroboroboana. Toy izany koa no mihatra iombonana amin'ny fianakaviana mivantana ny olona toy izany.
Na dia mpilalao maro azo nahazo tombontsoa, tombony iray ihany no miasa noho ny aminareo na oviana na oviana. Ny tombony fifandanjana miseho dia ny fifandanjana ny mpanao tombony ihany. Ny iray manontolo niisa tombony azo jerena ao amin'ny “ny kaontiko” faritra.
Terms sy Conditions ny 50% Match Bonus
Terms sy Conditions ny Valentines Bonus SPINS
Twin kofehy ireny Alakamisy fepetra
Fepetra avy Golden Ejipta
UK Slots No Deposit Bonus – Coinfalls Mobile £5 Free!